वेदनाको क्यानभासमा पोतिएका रङ्गहरू [सत्यकथा] - शखदा साहित्य
वेदनाको क्यानभासमा पोतिएका रङ्गहरू [सत्यकथा]
6:31 AM कथा
प्रिय पाठक, बिष्णु गौतमजी 'समयको क्यानभासमा' एउटा काल्पनिक कथा थियो । त्यसमा कथाकारप्रति हार्दिकता र आत्मीयता थियो । तर अहिले त्यसको विपर्ययको रूपमा तपाईँको यो कथा जीवन्त बनाउन गइरहेको छु । भन्नुको अर्थ त्यो काल्पनिक कथाको ठीक उल्टो यो पाठकप्रति आत्मीयता र हार्दिकताले समर्पित सत्यकथा लेख्न गइरहेको छु । यसका वाक्यवाक्य अझ भनू प्रत्येक शब्द सत्य छन् । कतै अयथार्थ र अवास्तविक पोतिएको छैन । वेदनाको क्यानभासमा मैले तपाईँको आदर्श जीवनको कथा थोरै भए पनि रङ्गाएको छु । यो मेरो तपाईँको वेदनाप्रति हृदयदेखि नै पोतिएको समवेदनाको थोरै रङ्ग हुनेछ ।
पाठकवृन्द, अब म थोरै आफ्नो कुरा गर्छु है । धेरै ग्राहकसेवी झैँ म पनि आजकल फेसवुकमा निकै हराउने गर्छु वि.स. २०६७ सावनको सोरह गते फ्रैन्डसिप डेको दिन बिहान- साथीहरूसँग च्याटमा कुरा गरिरहेको बेला बिष्णु गौतम नाम गरेको ब्यक्तिले च्याटमा अभिवादन गर्यो । मैले पनि अभिवादन फर्काए ।
यस्तै खाले कमेन्ट फेसवुक को मेसेज र ब्लगमा पनि आएको थियो । यो कमेन्ट पढेर मैले श्रीमान र छोराछोरीसँग भावना सेयर गर्दै यसो भनेको थिएँ- 'हेर न कस्तो संयोग पहिला म कथाकार दिवाकरलाई आर्दश बनाएर कथा लेख्थेँ । अहिले आफै दिवाकर भएँ । खाना खाने बेलामा परिवारका सबैका सामु मेरो यो साहित्यिक घटनालाई यसरी फिँजाएकी थिएँ । एकछिन डाइनिग टेबुलमा हाँसोको फोहरा छुट्यो । छोरीहरू र श्रीमानले आ-आफ्नै प्रतिक्रिया दिए । मानिसको जीवन पनि अनौठो हुँदो रहेछ । समयको छालले कहिले कहाँ पुर्याउने अनि कहिले कहाँ - भविष्यमा के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदो रहेनछ । अझ भनू पन्ध्र मिनेटभित्र जीवनको कथाले कस्तो मोड लिने हो केही थाहा नहुने रहेछ । यसरी मैले मनका कुरा परिवार माझ सेयर गरेको थिएँ । अहिले च्याटमा उही बिष्णु गौतम नाम पढ्दा ब्लगको कमेन्टले मेरो सस्मरणरूपी मस्तिष्कमा वर्तमानको हथौडीले हान्दै थियो । त्यसपछि फेरि च्याटमा संवाद सुरु भयो । मैले भनेँ- 'अँ मैले थाहा पाएँ । कमेन्ट पठाउनु भएको रहेछ । धेरै खुसी लाग्यो । धन्यवाद ।'
उसले यसोभन्दा मभित्र कताकता नमीठो काल्पनिक दुःखले दुख्न पुगेँ । यति सुन्दर जवान केटाहरूको फोटो प्रतिष्ठानको सिरानमा राखिनु अनि उसले यसो भन्नु । म शोकको तरङ्गमा तैरन पुगेँ । मलाई लाग्यो पक्कै यो विरहको कुरा हुनुपर्छ । मैले आफ्ना जवान छोरीहरू र छोरा आँखामा झलझली सम्झन पुगेँ । उनीहरूका सानासाना दुखका कुरामा म कति मर्माहत हुन्छु । कति संवेदनशील बन्छु । लाग्छ उनीहरूलाई कतै चोट नपरोस् । कतै दुःख, पीडाले नलखेटुन वाधा र व्यवधानले नघेरुन् । म घरदेखि स्कुल र कलेज र सबैतिर आफ्नो ध्यानदृष्टि लगाउँदै सूक्ष्मरुपले पछ्याउँदै उनीहरूलाई सुरक्षित र सहुलियत प्रदान गर्न कटिबद्ध भएर लागेको हुन्छु । उनीहरूलाई हानी पुर्याउने कतिपय कुरा सेन्सर गर्दै र फाइदा हुने कुरा इन्सटल्ड गर्दै प्रत्येक पल उनीहरूको साथमा हुन्छु । तर यति जवान छोराहरू साथमा छैनन् भन्दा कसैले पत्याउन सक्ला -
'अनि........-' मलाई फेरि नमिठो संवेदनाको छालले बगाएर वियोगको काल्पनिक किनारामा लगेर पर्छायो । म छटपटिन थालेँ । उसले ढिलो टाइप गर्यो ।
हे भगवान ! आज बिहानै मैले यो कस्तो पीडादायी कुरा के सुन्नु पर्यो । म विरहको आँधीमा विचलित हुँदै थिएँ । तर पनि आफुलाई संयमता र धैर्यताको बाँधले बाधेर मुटु दरो पारेर उसको उत्तरको प्रतिक्षामा थिएँ ।
जीवन र मृत्युको दोसाधमा, अब कसैलाई फेरि नपुर्याऊ है ।
लेखन शैलि राम्रो लाग्यो।बिष्णुजिको सत्यकथा मन छुने खाल्को छ।
didi , yo katha padda na rune manis sayed sansarma kam nai painchha hola. maile ta afule afulai control nai garna sakina. Sayed ma pani euta jimmewar babu bhayeko le hola. ma uhahur ma yesoi lekh marfat mirtatma ko chirsanti ko kamana gardoi baba mummy ra sampurna ristedar lai shahan garna sakne sakti prapta hos bhanera bhagawan sanga prathana gardachu. ani bastabikta lai yeti sahaj rupma paski dinu bhayeko ma hajur lai muri muri dhanyebad bhanna chahanchhu.
sarita lama said...
dyesporic sahitya bhaneko k ho yes barema please malai khulai dinus na hai............
hajur ko pathak
hope you are okey. i got an oppertunity to see and read your site from overseas. I like your writting style and subject. I love nepali literature and pen.I wish you all the best to your pen life and our nation's literature.
thank you very much to providing us this opportunity.
धेरै धेरै धन्यवाद छ मिराजी । मलाइ खुसी लागेको छ ।
सरिता बहिनी, डायस्किरक साहित्य भनेको देशदेखि बाहिर बसेर लेखिएको साहित्य हो । आफ्नो देस छोडेर गएकाहरुले विदेसमा बसोबास गर्दा लेखेको आफ्ने भाशाको साहित्यलाइ डायस्पोरिक साहित्य भनिन्छ ।